Baahin: Arbaca, Mar 21, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Ciidanka amniga ee Bossaso oo soo bandhigay walxaha qarxa & hub fudud oo ay qabteen; Maxkamada ciidanka qalabka-sida ee Puntland oo uga digtay ciidanku in ay qalab ciidan ku dhex qaataan magaalooyinka; Baydhabo oo bandhow lagu soo rogay; Wada-xaajoodkii ka socday gobolka Karkaar oo yididiilo laga muujiyey. – Radio Daljir
Baahin: Arbaca, Mar 21, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Ciidanka amniga ee Bossaso oo soo bandhigay walxaha qarxa & hub fudud oo ay qabteen; Maxkamada ciidanka qalabka-sida ee Puntland oo uga digtay ciidanku in ay qalab ciidan ku dhex qaataan magaalooyinka; Baydhabo oo bandhow lagu soo rogay; Wada-xaajoodkii ka socday gobolka Karkaar oo yididiilo laga muujiyey.
Maarso 21, 2012 12:00 b 0
Ciidamada dawladda Federalka oo la wareegay degmada Xudur ee gobolka Bokool.
Baahin: Salaasa, Mar 20, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Bossaso. Sodomeeyo qof oo ku dhimatay dagaal ku dhex maray Dhuusamareeb Al-shabaab & Ahlu-sunna; M/weyne Faroole oo furay wada-xaajood 2 ardaa oo muran-dhuleed hore ugu dhex maray Rako Raaxo, Bari; Shire, wasiirka xanaada xoolaha oo ka warramay sayalado xooleed oo laga hirgalinayo Puntland; Gaashaan, wasiiru dawlaha maamul wanaaga Puntalnd oo ka xog warramay dhismaha golayaasha deegaanka ee gobollada.